Shirkada xawaalada SWIFT: Qaab fudud, raqiis oo online ah. - NorSom News
Shirkada xawaalada SWIFT: Qaab fudud, raqiis oo online ah.
Shirkada xawaalada Swift waxey dhamaan dadka kunool Norway iyo dalalka kale ee Nordica ogeysiineysaa in shirkadu ay soo kordhisay adeeg xawaaladeed oo casri ah ama online- ah, kaas oo kuu sahlayo inaad si fudud meesha aad rabto ugu dirto lacagta xawaalada, adiga oo gurigaaga aan dhaafin.
Dir lacag wakhtiga aad doonto !
U dir si fudud, degdeg ah, ammaana ah
Ka dir Online markasta iyo meel kasta oo aad joogtid – looma baahna inaad booqato wakiil.
Isticmaal mobilkaaga gacanta ama PC-gaaga Kharash yar iyo dhib la’aan
Dir Lacag mar walba iyo meel walba !
Previous articleQiimaha ganaaxa “Innkasso”-da oo hoos loo dhigay.
Next articleDowlada oo qorsheyneyso inay mar kale kordhiso lacagta caruurta.